Shiinaha – Qoys Shinni la nool muddo 15 sanno ah! | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Shiinaha – Qoys Shinni la nool muddo 15 sanno ah!
Shiinaha – Qoys Shinni la nool muddo 15 sanno ah!
Himilo – Aragga kolonyo Shinni ah oo hareerahaada ka gunuunacaysa waxay ku filan tahay inay kugu rido argagax, hayeeshe hal qoys oo Shiinees ah ayaa gurigooda kula noolaa muddo 15 sanno ah. Waxay xattaa ka guran jireen malabka iyaga oo lacag ka sameynaya.
Dad badan laga yaabee inaysan suuraysan karin. Balse inaad qolkaada qeyb ka siiso Shinnida iyada oo xurriyo kugula noolaanaysa, waxay haddana kuula dhadhamaysaa si kale. Hayeeshe qoyska Shiinaha ku nool ayaa caddayn kara inay tahay maangal – keliyana ma ahan maalmo ama toddobaad, balse sannado badan.
Muuqaal fiidiyow ah ayaa muujiyay aqal ku yaalla Gunagnan – halkaas oo Shinni ay ku dhex nooshahay qolka fadhiga ee reerka. Milkiile Yongfu Li wuxuu sheegay in hal maalin ay si fudud ugu timid kadibna ay aqalkeeda ka dhisatay gurigiisa. Waxaa socotay xaflad aroos xilligaas, wuxuuna imaantinkeeda u arkay mid hambalyo xanbaarsan. Hayeeshe halkii uu ka eryi lahaa, wuxuu oggolaaday inay qolka fadhigiisa ka dhistaan gurigooda gaarka ah.
Qaadashada weedha Fengshui si kal iyo laab ah, Yongfu Li wuxuu u idmay Shinnida inay la noolaadaan isaga oo ka qaadanaya malabka ay soo saaraan saddex jeer sanadkiiba. Wuxuuna ka gurtaa malab dhan 5 kg oo ku kacaya 15$ – celceliska sannadka oo dhanna waa 450$.
Ma aha mashruuc ama heshiis xun in aadan iska eryin Shinni si ay malab kuugu sameyso.
Li hadda wuxuu gurigiisa kula nool yahay Shinnida muddo 15 sano ah. In kasta oo uusan sheegin haddii ay kala kulmeen dhib, haddana shaki kuma jirto inay ugu yaraan qaniinyo ka heleen.
Previous: Arsenal oo diyaarineysa heshiiska qandaraaska cusub ee Aubameyang
Next: Liverpool oo u dhaqaaqi karta Sancho haddii Man United ku guuldarreysato heshiiskiisa